Vacuum nadiifiye (3) Warshad - Shiinaha Vacuum Nadiifiyaha (3) Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
10L / 15L Nooca aamuska Nadiifi Vacuum - HT-10S / HT15S / 15J
Sababta awoodda aad u badan, arrinta ugu muuqashada badan ee nadiifinta faakiyuumku waa buuqa, laakiin inta badan aagga dadku ma aqbali karaan buuqa mashiinka nadiifinta waqtiga ganacsiga. HT-10S waa nooca faakiyuumka oo carrab la ', jirka yari wuu dhaqaaqi karaa wuuna sahlanaan karaa.
20L / 32L / 45L Nadiifiye Vacuum Qalalan YJ1020 1032 1245
Nadiifiyaha faakiyuumka ee qallalan iyo qalalan wuxuu la mid yahay nadiifiyaha qasacadaysan ee aasaasiga ah, waxaa loogu talagalay in wax looga qabto dareeraha daadanaya sida giraangirta sida wasakhda qallalan iyo siigada. Waxaa markii hore loo adeegsaday shaqooyinka culus, badanaa guryaha ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, moodello cusub, is haysta oo cabbirro kala duwan leh ayaa dhowaanahan loogu talagalay soosaarayaasha loogu talagalay isticmaalka gudaha.
15L / 32L / 45L Nadiifiyaha Nadiifi Vacuum BS-1020A 1032A 1245A
Faakiyuumle kasta wuxuu la yimaadaa dhowr lifaaqyo. Lifaaq kastaa wuxuu leeyahay adeegsi gaar ah, nooca shaqada nadiifinta ee aad bilaabi doontana waa inay go'aamisaa lifaaqa aad isticmaali doontid.
15L / 30L Nadiif iyo Nadiif Vacuum H6001 H6002 H6003
Faakiyuumle kasta wuxuu la yimaadaa dhowr lifaaqyo. Lifaaq kastaa wuxuu leeyahay adeegsi gaar ah, iyo nooca nadiifinta shaqada ee aad tahay Vacuumka qoyan iyo qalalanba waa aalad aad muhiim u ah iyadoo ay ugu wacan tahay adeegsi ahaan iyo adeegsi ahaan. Waxa xiisaha lihi, kaliya awood uma laha nadiifinta qashinka, boodhka ka saarida iyo nuugista dareerayaasha daadanaya, laakiin sidoo kale waxay awood u leedahay inay qabato shaqooyin dhowr ah sida kuwa hoos ku xusan.
70L / 80L Nadiif iyo Nadiif Vacuum H6004 H6005
Miiraha marada ku jira ayaa kuu ogolaanaya inaad si fudud u nadiifisid faakiyuumka waxayna ka ilaalin kartaa faakiyuumka waxyeellada boodhka.
70L / 80L Nadiifiye iyo Vacuum Nadiifi oo qallaji H6006 H6007
Naqshadeynta faakiyuumka faakiyuumku wuxuu ka dhigayaa shaqada nadiifintu inay noqoto mid waxtar badan oo fudud.
15L / 30L / 60L / 80L qoyan iyo nadiifiye Vacuum LC151, LC301, LC602S, LC 802S
Mashiinka faakiyuumka qalalan ee qoyan ayaa badanaa loogu talagalay qaab fudud. Waxay isticmaashaa laba nidaam baaldi oo loo adeegsado kala sooca walxaha dareeraha iyo kuwa adag. Nadiifiyuhu wuxuu kaloo leeyahay dekedda wax lagu cuno ee nuugaysa dhammaan wasakhda la raaci doonta tubbo leh qashinka kale ee la nuugay.
90L Qoyan iyo Nadiif Vacuum H6015 H6016
Taangiyada balaastigga ah ee semitransparent, acidproof iyo anti-alkalis, iyo caabbinta iska caabbinta.